Somali, John: Lesson 125 - Gabagabaynta Kitaabka Yooxanaa (Yooxanaa 20:30-31) | Waters of Life
Home -- Somali -- John - 125 (Conclusion of John's gospel)
QEYBTA 4 - IFTIIN GUULAYSTA GUDCUR (YOOXANAA 18:1 - 21:25)
B - AH SARAKICIDDA IYO MUUQAALKA MAXIISA (YOOXANAA 20:1 - 21:25)
4. Gabagabaynta Kitaabka Yooxanaa (Yooxanaa 20:30-31)
30 Haddaba waxaa Ciise ku sameeyey xertii hortooda calaamooyin kale oo badan oo aan ku qornayn kitaabkan. 31 Laakiin waxyaalahan waxaa loo qoray inaad rumaysataan inuu Ciise yahay Masiixa, Wiilka Ilaah, iyo inaad rumaysataan inaad nolosha ku lahaataan magiciisa.
Dhamaadka cutubkan, waxaanu gaareynaa finalka waxa Yooxanaa runtii qoray. Qoraa qarsoodiga ah iyo wacdiyuhu wuxuu ku dhawaaqay koritaanka iftiinka Ilaah ee mugdiga ah ee aan u arkin. Laakiin intii wax walba la siiyey, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, kuwaasu waa rumaysan yihiin. Wacdiyihii weynaa ayaa nagu soo dejiyey si qoto dheer oo wehel ah oo wehelnimo leh oo ka dhexeeyo Ciise. Waxa uu inoo muujiyay geerida iyo koritaanka Masiixa, si aan u rumaysanno isaga oo nala arko isaga oo nala nool.
Marka la eego, Rasuulku wuxuu hoos u dhigay afar mabaadi, si uu u nadiifiyo nadiifinta injiilka iyo ujeedada qoraaga.
Yooxanaa ma qorin tirooyin si loo daboolo dhammaan hadallada iyo falalka Ciise. Haddii kale, wuxuu lahaa lahaa qalimaan dhowr xabo. Waxa uu soo xushay calaamadaha iyo sheekooyinka kuwaas oo muujin lahaa shakhsiyadda Ciise ee shakhsi ahaaneed. Qoraalkani ma aha wax lagu qiyaaso Ruuxa Ilaah ee aragtida ama miyir la'aanta. Dhinaca kale, wuxuu ahaa mid masuul ah, oo Ruuxa Quduuska ah u waxyoonay, inuu doorto dhacdooyinka caanka ah, oo uu si naxariis leh u muujiyo Lambarka Ilaah oo ka dhigaya dembiga adduunka, dhibanaha la dilay.
Yooxanaa wuxuu inooga soo qoray injiilka in la ogaado in ninkii Ciise Ciisihii reer Naaseret, uu ahaa mid cad oo la quudhsaday, waa Masiixa, kan ah mid la ballanqaaday iyo Wiilka Ilaah isla wakhtigaas. Iyadoo labadan magacood, wuxuu la kulmay dareenka Yuhuudda inta lagu jiray ereyadii Axdiga Hore. Haddaba siduu isaga u xukumay quruuntaas iskutallaabta ayay ku qodobtay wiilkii ballanqaaday Daa'uud. Ninka Ciise wuxuu u xaqiijiyay Masiixa runta ah inuu yahay Wiilka Ilaah. Jacaylka weyn ee Ilaah iyo quduusnimada daahirsanaanta waa ka baxsan cay, ama dayacaad u ah qof kasta oo niyad wanaag leh. Yooxanaa ayaa ammaanaya Ciise. Muujinta Ciise ee noo muuqata waa mid aan la barbar dhigi karin, si aan u ogaanno jacaylka Wiilka Ilaah, kaasoo noqday nin si aan u noqonno carruurta Ilaah.
Yooxanaa ma rabo in uu abuuro oo keliya qirasho qoto dheer oo inaga dhexaysa, laakiin wuxuu ku xidhnaa wiilka Wiilka. Sida Ciise yahay Wiil, Ilaah wuxuu noqonayaa Aabahay. Maadaama uu kan weyni yahay Aabbeheen, wuxuu dhalin karaa caruur badan, oo buuxsamay noloshiisa weligeed ah. Dhalashada cusub ee dhiigga Masiixa iyo Ruuxa nagu dhex jira, waa yoolka Yooxanaa injiilka. Sidaa darteed, miyaad dhalasho ahaan u dhalatay, mise weli baad ku dhimatay dembiyada? Ilaah miyuu idin dhex joogaa? Oo miyuusan mid ka dhigin Ruuxa Qoduuska ah?
Dhalashada labaad waxaa lagu dhammaystiraa rumaysadka Wiilka Ilaah. Kii isaga rumaystaa wuxuu galabsadaa nolosha weligeed ah. Waxaan leenahay noloshaan xiriir joogto ah oo la leh iimaanka. Isagu wuxuu ku sii jiraa Ciise, wuxuuna ku dhex jiraa Ciise Masiix. Rumayste noocan oo kale ah wuxuu ku kori doonaa Ruuxa iyo runta, iyo midhaha ilaahnimada noloshiisa ayaa ku soo kori doona. Nolosha daa'imka ahi waa jacaylka Ilaahay inoo keeno inaynu kuwa badani rumaysanno rumaysashada Ciise, iyaga oo u jecel inay isaga jecel yihiin, oo weligoodna joogaan.
DUCO: Rabbi Ciise, waxaan idiinka mahad celinaynaa injiilka sida Yooxanaa wacdiyeyaashii aad ku diiwaangashatay. Marka la eego buuggan gaarka ah, waxaan u aragnaa sharaf iyo runti. Waannu idinku farxi doonnaa, maxaa yeelay, waxaad noo ahayd inaannu rumaysadkiinna ku rumaysanno, iyo inaad nimco noo maamuus badan lahayd. Nooga dhig Raxmaddaada, Inaad ku jeceshahay inaad dhawrto amarradaada. Meelaannu si caddaan ah ugu qaadnaa magacaaga, in saaxiibadeenu ay ku kalsoonaan karaan oo ay helaan nolol fara badan rumaysadka.
Muxuu Yooxanaa ku faahfaahiyay dhamaystirka injiilka?
Page last modified on March 11, 2020, at 12:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)